Ny Sandals Foundation dia manangom-bola ao amin'ny Ivotoerana ho an'ny Tanora
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Ny Sandals Foundation dia manangom-bola ao amin'ny Ivotoerana ho an'ny Tanora
Ny kianja filalaovana basikety sy kianja filalaovana multi-tanjona ao amin'ny Buckfield Playfield, eo afovoan'i Ocho Rios any Jamaika, dia nahazo fiovana lehibe sy fanavaozana mba hanompoana bebe kokoa ny mponina manerana ny paroasy St. Ann. Taorinan'ny fampiasam-bola 50,000 XNUMX dolara amerikana avy amin'ny Sandals Foundation, tsara kokoa noho ny hatramin'izay ny foibe.
Ny afovoany dia toerana azo antoka ho an'ny tanora handany ny fotoanany ary ivon-toerana lehibe hampiantranoana lalao finamanana, fifaninanana ara-panatanjahantena ary hetsika fialamboly. Ilay fotodrafitrasa nohavaozina izao dia mirehareha amin'ny kianja filalaovana basikety nipoitra indray sy kianja multigpose miaraka amin'ny fitaovana netball miaraka, fipetrahan'ny mpijery vao namboarina, jiro nanatsarana ny hetsika tamin'ny alina sy ny fiarovana, ny fefy ary ny hosodoko feno loko mba hanazava ny toerana.
Talen'ny asa ao amin'ny Sandals Foundation, Karen Zacca, dia nilaza fa nanomboka ny taona 2019 ny tetik'asa ary asa am-pitiavana nifanaraka tamin'ny fanoloran-tenan'ny Foundation ho an'ny fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina sy ny fanaovana tanora amin'ny alàlan'ny fanatanjahantena.
“Ny habaka mandrisika ny fanatanjahan-tena dia mampivondrona ireo mponina mba hilalao, hanorina fifandraisana, hampivelatra ny fahaiza-manao mandritra ny androm-piainana ary manan-danja amin'ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina. Eny ivelan'ny fianakavianay akaiky dia manampy antsika hanome fahafaham-po antsika ny vondrom-piarahamonintsika ary ny Sandals Foundation dia hanome lanja foana ny famoronana toerana azo antoka hivelaran'ny vondrom-piarahamonintsika. "
Mpitantana ny fifandraisana amin'ny daholobe ao amin'ny Sandals Ocho Rios Resort, Lyndsay Isaacs, izay nandrindra ny lozisialy dia nilaza fa ny ekipa dia nanao izay hampiasan'izy ireo ny fahaizan'ny mpandraharaha sy ny mpiasa ao an-toerana hanao ny fanavaozana.
“Ny tetikasa manompo ny fiaraha-monina dia tsy maintsy mampiasa ny serivisy ho an'ny fiarahamonina ihany koa. Araka izay tratra, ny Foundation dia manentana ireo matihanina eo an-toerana hanome ny fahatsapana ny fananana amin'ny fizotran'ny fampandrosoana ary koa mba hanohanana ny fiveloman'ireo izay miasa. "
Ireo sary an-drindrina marobe, napetraka teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena, dia nosoratan'ny mpanakanto ao an-toerana Zara ary nolokoin'ny vahiny sy ny mpikambana ao amin'ny Sandals Resorts izay nilatsaka an-tsitrapo nandritra ny hetsika fitoriana natao talohan'ny nanombohan'ny coronavirus.
“Raharaham-pianakaviana io ho anay, ary ny Sandals Foundation no fiara ahafahan'ireo vahiny vahininay, mpikambana ao amin'ny ekipa, mpiasan'ny dia ary mpiara-miombon'antoka manompo ireo vondrom-piarahamonina iasantsika. Faly be aho tamin'ny vokatr'ity tetik'asa ity ary tsy isalasalana fa hampiasa izany tsara ny olona ao St. Ann. ”
Dehalo Sappleton, mpilalao basikety ao Ocho Rios, dia nilaza fa ny fitsarana nohavaozina dia hanampy ireo ekipa eo an-toerana hahazo ny diany any amin'ny taniny.
“Ankasitrahana izaitsizy ity karazana fanomezana ity, ary ho raisinay tahaka ny anay ihany izany. Ny sasany amin'ireo mpilalao basikety manan-talenta indrindra dia avy any Ocho Rios, ary matetika mankany Kingston sy Montego Bay izahay no manao ny anarany. Ity fitsarana nohavaozina ity izao dia manome antsika fahafahana hanao ny anarantsika any amin'ny tanàna nahaterahantsika. ”
Ary, Kurt Dale, tompon'andraikitra amin'ny fanatanjahantena ao amin'ny paroasy St. Ann miaraka amin'ny Institute of Sports, dia nilaza fa ireo fanamboarana nohavaozina dia hanampy ny netballers vao manomboka hampitombo ny fahaizany ary hampivelatra ny haavon'ny fandraisana anjara amin'ny fanatanjahantena.
“Hitanay fa hatramin'ny 50% ny olona tsy te hampandroso ny fahaiza-manaony amin'ny netball, satria tsy manana toerana hilalaovana izy ireo. Ankizivavy maromaro no tsy maintsy mandeha lavitra mba hahafahany milalao, fa noho ny fisian'ny fitsarana toy izao dia ho mora kokoa amin'izy ireo ny mivoaka sy mandray anjara. ”
Loza amerikana ratsy indrindra tany USVI, Hawaii, Guam, Kentucky, Montana, Puerto Rico, Kansas, Missouri, Idaho
Equities Hotel voafantina hitantana hotely serivisy feno IHG any Boone North Carolina